Proverb 176 Akory ilay malaina : asaina miasa lohataona , manao hoe vaky lafika aho; asaina manosy fahavaratra, mararin' ny tazo aho; avela an-tanàna, tsy mahamasa-kanina . [Houlder 1895]
Proverb 530 Angamenavava ity : tsofina, tsy mirehitra ; avela , mivaivay . [Veyrières 1913 #346]
Proverb 752 Atodin' anganga : avela , mahafaty raibe ; entina , mahafaty renibe . [Veyrières 1913 #5789]
Proverb 1100 Aza manao ombilahin' Ibosy : ampiadiana , tsy miady , ampihosena tsy mihosy , hanin-kena manala nify . [Rinara 1974 #550]
Proverb 1826 Dokodahy ririnina : amidy tsy lafo voamena , avela mandany mangahazo . [Rinara 1974 #1003]
Proverb 1891 Entina tsy zaka , avela tsy foy . [Veyrières 1913 #5792]
Proverb 2234 Hafahafa ohatra ny adin' ondrilahy : akorain-tsy mifampilanja , avela ihany mifamaky loha . [Rinara 1974]
Proverb 2251 Halam-patana navelan' ny razana . [Veyrières 1913 #3173]
Proverb 2253 Halanao mba ho voky ve aho, no tsy avelanao hiasan' olona ? [Veyrières 1913 #4488]
Proverb 2435 Hoatry ny loharano : tovozina tsy ritra , avela mihabe . [Veyrières 1913 #2187]
Proverb 4433 Mitondra roa hoatry ny vehivavy somorina : ny hetran- -dray tsy apetraka , ny lova tamin-dreny tsy avela . [Veyrières 1913 #1774]
Proverb 4635 Mpiasabe manao hisasahana : ny any ny tena indray no avela ho tany vao. [Cousins 1871 #1977]
Proverb 4685 Na dia eo aza ny akanga tsara soratra , ny afindrafindrao tsy azo avela . [Akademia 2005]
Proverb 4780 Na misodika ho herotra aza hianao, tsy avelan' ny ronono tsy ho iray razana . [Veyrières 1913 #1108, Cousins 1871 #2015]
Proverb 5197 Ny iasana ankehitriny, ny niasana taloha, ny hiasana any aoriana, ny fiasana isan' andro , ny fivelomana tsy azo avela . [Veyrières 1913 #3727]
Proverb 5631 Nitsapa sokin-tsy nahazo ka tsy navelan' Andriamanitra hihinam-boalavo . [Rinara 1974 #2799]
Proverb 5836 Ombilahin' Imozy : ampiadian-tsy miady , avela manoto ny namany . [Rinara 1974 #3406]
Proverb 5842 Omby latsaka an-konahona : mitomany mba hirongatra , fa tsy avelan’ ny hondratra . [Cousins 1871 #2547]
Proverb 5901 Osivavy maniry somotra : ny lova tamin--dray tsy avela , ny hetra tamin-dreny tsy afoy . [Rinara 1974 #3471]
Proverb 5927 Paraky nankaleo ahy ka raha tsy fotsy angola tsy avelako . [Rinara 1974 #3485, Rajemisa 1985]
Proverb 5993 Rafozana avy lavitra : tsy rotorotoina , tsy avela foana . [Veyrières 1913 #1468, Rinara 1974 #231, Cousins 1871 #2630]
Proverb 5998 Rafozana vao hita, ka tsy iorioriana , tsy hivakian-tratra ; kanefa tsy efa foana. [Cousins 1871 #2631, Veyrières 1913]
Proverb 6185 Raha tsy ny faladia no mivadika , raha tsy Itasy no iray sotro , tsy avelako tsy ho tonga any aho ! [Veyrières 1913 #4220]
Proverb 6465 Salasala hoatry ny akotralahy miakanjo jaky : hoharabaina , tsy andriana ; havela ihany, miakanjo jaky . [Veyrières 1913 #4090]
Proverb 6708 Tafik' i Brady : avela andrao mahazo babo ny vahoaka , ampan-dehanina andrao maty . [Veyrières 1913 #455]
Proverb 7281 Tono mahafeno lavenona ahy, ka raha tsy masaka tsy avelako . [Rinara 1974 #4198]
Proverb 7438 Tsy avelan' ny anaran-kisaraka , toa raty , efa lasa ka mbola ratin' akondro . [Rinara 1974 #4481]
Proverb 7441 Tsy avela tsy ho azo : an--danitra toharana , an-dafin-drano lakanina . [Rinara 1974 #4483]
Proverb 7973 Vaky vilany an-tsena : haladian-tsy azo avela , avela vita ho azy ihany. [Rinara 1974 #313]
Proverb 8200 Vilany vakin- -dRainibeboka : ifonana , tsy azo; avela vita ihany. [Houlder 1895]
Proverb 8210 Vinanto saro-kenatra : asaina, tsy avy; avela, mangala- pihinana . [Veyrières 1913 #1483, Cousins 1871 #3679]
Proverb 8242 Voalavo latsaka an-kentona , ka ny halavoana leo ihany, fa ny akoralavan' ny olona no tsy toha ; hitraka moa tsy avelan' ny henatra ; hiondrika , tsy avelan' ny voninahitra . [Veyrières 1913 #6053]
Proverb 8293 Volamena latsaka ambovoka , tsy avela ny soa tsy hamiratra. [Beaujard 1998]